ငါ့ကိုခေါ်ပါ၊ ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့ဆုတောင်းပေးပါ။ ? ၁၀ မိနစ်အတွင်း
သို့သော်ထိုသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအနာပျောက်စေသောအနာများများစွာပျောက်ကင်းသွားပြီးပျောက်ကင်းအောင်မကုသနိုင် သ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထာဝရထာဝရချည်နှောင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျော်လွှားနိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၏အဆင့်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
ဘ ၀ သစ်ကိုပိတ်ခြင်းသံသရာများကိုမပြီးစေဘဲဘ ၀ သစ်ကိုစတင်ခြင်းသည်မုန်တိုင်းဒဏ်ကိုမခံရပ်နိုင်သည့်အခြားအပျက်အယွင်းများပေါ်တွင်အဆောက်အအုံတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်တူသည်။ အနှေးနှင့်အမြန်အဆောက်အအုံသစ်သည်အဆုံး၌လဲကျသွားလိမ့်မည်။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သောအတွေးအခေါ်မှရွတ်ဆိုသောစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ဆုတောင်းခြင်းမရှိပါ။
1 ငါ့ကိုခေါ်။ ခွင့်လွှတ်ပါဟုတောင်းလျှောက်ရန်ဆုတောင်းခြင်းသည်အမြဲတမ်းအလုပ်ဖြစ်သလား။
1.1 ၁၀ မိနစ်အတွင်းဖုန်းခေါ်ပါ။
1.2 ၁၀ မိနစ်အတွင်းကျွန်ုပ်ကိုရှာပြီးခွင့်လွှတ်ပါရန်ဆုတောင်းပါ
1.4 ငါ့ကိုခေါ်ဖို့ San Antonio တွင်ဆုတောင်းပါ
2 စာကြောင်း ၄ ခုပြောလို့ရမလား။
ဆုတောင်းချက်များ ဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားသောအမြဲအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။
ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောသူတော်စင်မှ4ကွဲပြားခြားနားသောပြသပါလိမ့်မယ်။ မင်းတို့အားလုံးတစ်နေ့တည်းမှာဆုတောင်းလို့ရမယ်၊
ကျွန်ုပ်သည်သစ္စာရှိသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအကူအညီတောင်းခံသည်၊ သင့်အားအရေးကြီးသောခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုထားသည်။ အရာရာကိုများစွာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။
ငါခေါ်ဆိုမှုကိုလိုချင်တယ်၊ ဒါကကောင်းတယ်၊ သတင်းကောင်းကိုဖြစ်စေတယ် San expedito.
သင်, ငါ့နာယကသူတော်စင်, ငါ့အကျိုးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လူတစ် ဦး ကိုလမ်းပြ။
ပို။ ပင်အပူတပြင်းဖြစ်ပွားမှုသည် ထို့နောက်ပို။ ပင်အပူတပြင်းအစီအမံလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ဆယ်မိနစ်အတွင်းခေါ်ဆိုမှု၏ဆုတောင်းချက်သည်စစ်မှန်သောအရေးတကြီးကိစ္စရပ်များတွင်အကျုံးဝင်သည်။ လူသားများလုပ်ဆောင်ရန်မတတ်နိုင်သောအရာမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆုတောင်းရန်သာအရေးကြီးသည်၊ မှတ်သားသင့်သည်။
အမှန်တရားသည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဤဝါကျတွင်တူညီသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ၎င်းကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည် ယုံကြည်ခြင်းကိုသာရောင်ပြန်ဟပ်သင့်သည် ဆုတောင်းသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်.
၁၀ မိနစ်အတွင်းကျွန်ုပ်ကိုရှာပါ ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်
ကျေးဇူးတော်ကိုတောင်းပန်ပါ၏။ ကောင်းမြတ်သောဘုရား၊ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်၎င်း၊ ဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်း၊ ငါ့ကိုဝိညာဉ်နှင့်၎င်း၊ စုံစမ်းစေခြင်းငှါ၎င်း၊ ငါတောင်းပန်ပါ၏။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, သင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ကုမ္ပဏီ၏, အိုး, San Cipriano, အစွမ်းထက်!
သူအိပ်ရာပေါ်မှအိပ်ရာဝင်ချိန်တွင်သူအိပ်ရာမှထပြီးကျွန်ုပ်ကိုရှာပါ (အိုနာမအားပြောပါ) အို…သခင်၊ သူသည်ကျွန်ုပ်အားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။
သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုလွမ်းဆွတ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ဘဝမပါဘဲမိမိအသက်တာကိုမတည်ဆောက်နိူင်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးပြီးထပ်တလဲလဲပြုမူခံစားခဲ့ရသောဆင်းရဲဝေဒနာခံစားနေရသူများ၏နာယက၊ ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်သောအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ရန်၊ သူ၏လှုံ့ဆော်မှုများကိုပြန်လှည့်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုရှာဖွေရန်သူသည်ကျွန်ုပ်အားပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းအတွက်စာရေးခဲ့သည်။ သူခြေထောက်တွေကသူ့ကိုထိုင်ခုံဆီခေါ်သွားပြီးသူတွေ့တဲ့နေရာကိုတွေ့တယ်။
အိုး၊ ငိုကြွေးမြည်တမ်းနေသောကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုပေးသည်၊ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာပေးသနားတော်မူသော၊ ကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးရသူပြန်လာခြင်းသည်အလွန်နီးကပ်သောစိတ်ဝိညာဉ်၏အံ့ဖွယ်အမှု ...
Benemerito San Cipriano, ကျွန်ုပ်၏အဖ၊ ကျွန်ုပ်တောင့်တသောအံ့ဖွယ်အရာ၊ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူပါကောင်းချီးမင်္ဂလာကျွန်ုပ်ထံသို့လာပါစေ။
ဤဆုတောင်းခြင်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်။ လုပ်ဆောင်ရမည် စစ်မှန်တဲ့အရေးပေါ်၏အခါသမယ သူတစ်ပါးကိုမစဉ်းစားဘဲကျွန်ုပ်တို့တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်။ မမေးနိူင်ပါ။
နှလုံး၏တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုသည်အခြားသူတစ် ဦး အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးအတွင်း၌ကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုကိုရှာတွေ့ပြီးအချိန်အနည်းငယ်ယူပြီးအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ထံသို့အထူးဆုတောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
၎င်းသည်ကလေးတစ် ဦး၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်း၊ မိသားစုဝင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ကြာမြင့်စွာမတွေ့ဖူးသောမိတ်ဆွေတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်ပြီးထိုပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါ၌သာတွေ့နိုင်သောတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်နေသည်။
ချစ်မြတ်နိုးရသောဖခင်ကျွန်ုပ်ငြင်းပယ်ခံရခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ပါသည်။ (ပုဂ္ဂိုလ်၏အမည်) ငါ့ကိုခေါ်။ သင်၏ခံစားချက်အားလုံးကိုဖော်ပြရန်ကျွန်ုပ်အားပြောပါ။
ဒါကြောင့်ငါအပြန်အလှန်ငြင်းခုံဖို့မပျော်ရွှင်နိုင်ပါတယ်။ နာကျင်မှုမရှိဘဲရင်ဆိုင်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုခွန်အားပေးပါ။ မင်းအနားမှာရှိနေတဲ့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းသိပါတယ်။ ငါ့ကိုခွန်အားဘယ်တော့မှမထားနဲ့
လူတစ်ယောက်ကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းစိတ်ထဲထည့်ထားရင်သူကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းသိချင်နေတတ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလိုအပ်တာကအရမ်းလိုအပ်နေတယ်၊ ​​ကျွန်မတို့အဆက်အသွယ်လုပ်ချင်ပေမယ့်အိမ်ပြန်မလာမချင်းတော့မရပ်နိုင်လို့ဖုန်းခေါ်တာကအကောင်းဆုံးပဲ။
ဤသည်အတိအကျဒီ၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်း၏ဆုတောင်းပဌနာ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောနောက်ဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်တစ်ရာရာခိုင်နှုန်းထိရောက်ပြီးစွမ်းအားကြီးမားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါတို့နှုတ်၌ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကြီးမားသောစွမ်းအားရှိသည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းသည်ရိုးသားမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်အပြည့်အ ၀ တာဝန်ယူမှုဖြင့်ပြုလုပ်သင့်သည်။
ငါ့ကိုခေါ်ဖို့ San Antonio တွင်ဆုတောင်းပါ
San Antonio Today ဒီနေ့မင်းဆီကိုလာပြီးမင်းရဲ့အကူအညီလိုအပ်တယ်။
ကျွန်ုပ်သည် (NAME OF PERSON) ငါ့ကိုဖုန်းခေါ်စေလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်ခံစားချက်ကိုသူ / သူမအားပြောပြရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသော်လည်းသူ / သူမခေါ်လျှင်သာ ...
ငါငြင်းပယ်ခံရမှာကိုကြောက်ပေမယ့်ငါသိဖို့လိုတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ကိုကူညီနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောသူတစ်ယောက်ငါ San Antonio ငါဒီအခိုက်အတန့်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလားဆိုတာငါသိဖို့လိုအပ်တယ်။
ဤခေါ်ဆိုမှုသည်ကျွန်ုပ်အတွက်များစွာအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကြောက်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျော်နိုင်မည်ကိုငါသိ၏။ အာမင်
ဤခေါ်ဆိုမှုတွင်ရည်ရွယ်ချက်များစွာရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ရှေ့ဆက်ရန်လိုအပ်သောခွင့်လွှတ်မှုရရှိရန်၊ သူတစ်ပါးမည်မျှရှိသည်ကိုရိုးရိုးလေးသာသိရန်၊ သူသည်အရာများစွာအတွက်အချိန်တိုင်းတွင်တိုနေသေးကြောင်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။
အံ့သြစရာကတောင်းဆိုမှုသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည် - ငါ့ကိုခေါ်ပါ။
သို့ဆိုလျှင်မေးကြည့်ရုံမျှဖြင့်၎င်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိ၊ ရှင်းလင်းပြီးရိုးသားတဲ့ရည်ရွယ်ချက် ကျနော်တို့ဤမျှကာလပတ်လုံးသောဆက်သွယ်ရေးကိုလက်ခံရရှိ၏။
စာကြောင်း ၄ ခုပြောလို့ရမလား။
သူတို့အားလုံးဟာအင်အားကြီးမားပြီးလူတစ် ဦး တည်းအတွက်ဆုတောင်းပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့မှာအင်အားအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။
၁၀ မိနစ်အတွင်းကျွန်ုပ်ကိုခေါ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌အလွန်ပျော်ပါစေဆုတောင်းရန်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဆုတောင်းပါ။
Saint Cyprian သို့ဆုတောင်းခြင်း